‘China Open Mic’: Mijery Ny Fitombon’ny Dian-Tongotry Ny Fandrosoan’i Shina Ao Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2013 12:56 GMT
Nosamborin'ny Governemanta ao Ghana ireo Shinoa miisa eo amin'ny 169 eo, mpitrandraka harena an-kibon'ny tany tsy manara-dalàna, ny voalohan'ny volana Jona lasa teo, tafiditra anatin'ilay hetsi-pamoretana ireo mpitrandraka tsy manara-dalàna ao amin'ilay faritra faharoa mpamokatra volamena be indrindra aty Afrika izany. Navotsotra ireo mpitrandraka miisa 169 ireo taorian'ny fifampiresahana nisy teo amin'ny firenena roa tonta. Na dia teo aza izany, miisa 1 072 ireo Shinoa mpitrandraka volamena tao Ghana nalefa nody any amin'ny taniny taorian'ilay famoretana.
China Open Mic (@ChinaOpenMic) dia vohikala misokatra malalaka mikendry ny hampahafantatra sy hanova ny fomba fisain'ny Shinoa rehetra eo anatrehan'ny fivoarana niomerika, ary koa hitrandrahana ny fomba hahazoan'ny rehetra tombotsoa amin'ny fandrosoana misy ao Shina. Manome fomba fijery misokatra sy feno ny amin'ny fizarazaran-kevitra mahakasika ny fivoaran'i Shina eo anatrehan'ireo filazam-baovao manerana tontolo izao.
Ho fanolorana ilay lohahevitra, Andy Shuai Liu, mpanorina sady mpanoratra ao amin'ny China Open Mic ary tompon'andraikitry ny Serasera ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena, dia nanoratra hoe :
Iray amin'ireo hevitra notrandrahana tamin'ny adihevitra ny hoe, olana ve moa raha mainty na fotsy ny saka ? :
Jemila Abdulai (@jabdulai), mpanorina sady mpanoratra ao amin'ny Circumspect, blaogy iray mikasika an'i Ghana, Afrika sy ny Fampandrosoana
Shuang Bin (TBC), Manam-pahaizana amin'ny demokrasia sy ny Fitantanana niompana tamin'ny resaka fifandraisana Shina-Afrika
Hongxiang Huang, mpanao gazety iray tsy miankina ao amin'ny Southern Weekly sy ny Atlantic, mpanorina ny China-South Dialogue ary solo-tenan'ny mpandraharaha avy ao amin'ilay Orinasa Shinoa iray ao Kenya.
Merlin Linehan (@MerlinLinehan) (TBC), mpanorina ilay kabinetran'ny mpanolotsaina China in Africa ary manam-pahaizana amin'ny varotra sy fampiasam-bola ao Shina sy ireo tsena hafa vao mipongatra.
Winslow Robertson (@Winslow_R), mpahay tantara, manam-pahaizana mikasika ny fifandraisana Shina-Afrika, ary mpanorina ilay fikambanana Sino-Africa DC
Nofintinin'i Andy Shuai Liu, mpandrindra tao amin'ilay Vondrona, ao anatin'ity lahatsoratra manaraka ity, ny zavatra azony:
Jereo ato ny famintinana feno.